ज्योति लाइफको आईपीओ आजबाट, कति दिने आवेदन ? « LiveMandu
ज्योति लाइफको आईपीओ आजबाट, कति दिने आवेदन ?
२१ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०६:३६
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री आजबाट खुला गरेको छ । कम्पनीले सुरुमा फागुन २३ गते आइतबारबाट आईपीओ निष्कासको मिति तोके पनि आइतबारबाट निष्कासन गर्दा मेरो सेयरमा पर्ने चापले नियमित सेयर कारोबारको सेटलमेन्टमा पर्नसक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै मिति परिवर्तन गरेर आजबाट आईपीओ बिक्री खुला गर्न लागेको हो ।
कम्पनीको आईपीओ निष्कासनका लागि बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिल छ । इच्छुक आवेदकले सी-आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरोसेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड नियमावलीअनुसार सबै आवेदकलाई १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सामूहिक लगानी कोष र सर्वसाधारणलाई छुट्याएर बाँकी रहेको ५९ लाख ४० हजार कित्ता सेयर १० कित्ताको दरले बाँडफाँड गर्दा ५ लाख ९५ हजारले पाउनेछन् ।
पछिल्लोपटक निष्कासन भएको महिला लघुवित्तको आईपीओमा करिब १५ लाख ४० हजारको आवेदन सदर भएको थियो । यसमा पनि सोही अथवा त्यसभन्दा माथि आवेदन पर्नसक्ने भएकाले सेयर बाँडफाँड गोला प्रथाबाट हुन सक्छ । यसलाई आधार मान्दा १० कित्ता पनि गोलाप्रथाबाट पर्ने हुनाले १० कित्ताभन्दा बढी आवेदन दिन आवश्यक देखिँदैन ।